Du Fu. Nhetembo shanu dzekurangarira yakasarudzika yeChinese nhetembo | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo muShanghai Mazuva ese. (c) Yu Kubereka.
Uyewo anozivikanwa se Yako fu, mudetembi uyu ndomumwe we makuru echinyakare ezvinyorwa zveChinese. Muchokwadi, inofungidzirwa "Nyanduri mutsvene". Nhasi Ndinonunura chimiro chake (kana kuti ini ndinomuwana) nekutarisa chimiro chake uye basa, kwandakasarudza izvi 5 nhetembo.
2.2 Mvura yematsutso
2.3 Nguva yechando mambakwedza
2.4 Iyo Painted Goshawk
2.5 Ndichitarisa kumvura kubva pakutuka ndakarega moyo wangu uchibhururuka
Akazvarwa mugore 712, munguva pfupi yakaratidza kurerukirwa kudzidza uye tarenda. Aifarirawo kupenda, mumhanzi uye kutasva mabhiza. Muhudiki hwake, achida kupfeka Hupenyu hweBohemian, aive kufamba mukati meChina munguva yakabudirira ye tang dzinza.
Paakazowana basa senge mukuru, sezvo mukuyedza kwekutanga akatadza kupasa bvunzo dzeumambo, a kumukira iyo yaizodeura ropa reChina kwemakore mazhinji. Mambo akamugadza kuti aongorore, uye Du Fu aive ne humambo hwakaparadzwa.
Zvese izvo akazviratidza munhetembo dzinoverengeka, pamwe nehushamwari hwake nevamwe vadetembi vakuru vakaita se LiPo, kuda mhuri yake kana kunzwira urombo hweguta. Akapasa iyo makore apfuura yehupenyu hwake mu mamiriro ane njodzi uye nemari inotsigirwa neshamwari. Uye kunyangwe iye asina kukwanisa kuzivikanwa muhupenyu, mukurumbira wake nemukurumbira zvakawedzera mushure mekufa kwake.
Akakura kwazvo, akasiya nhaka ye nhetembo dzinodarika mazana mapfumbamwe. Mamwe mazita emabasa ake ndiwo Iyo oblique kubhururuka kweminyenganyenga o Kuunganidzwa uye kudzokorora kwenhetembo dzaTu Fu.
Pakati pemhepo ine simba,
pasi pedenga rakakwirira,
Tsoko dzinochemera kusuwa kwadzo.
Pamusoro pejecha jena rechitsuwa,
shiri inobhururuka, ichitenderera.
Mashizha asingagumi, anopepereswa nemhepo,
vanowira muridzo kubva mumiti,
uye Yangtze huru inomhanya zvine mutsindo.
Kure nekumba kwangu
Ndinochema matsutso akasuwa
uye nzendo dzinoita sedzisingagumi kwandiri.
Murume akwegura, oga akabatwa nehosha,
Ndinokwira kunzvimbo ino.
Dambudziko, matambudziko nekushungurudzika,
vakaita kuti bvudzi rangu rachena rive zhinji.
Uye handigone kubatsira asi kuisa girazi rangu padivi.
Mwedzi wechitatu, uye pichisi inotumbuka
anoyangarara pamusoro pamafungu erwizi.
Rukova runodzosera zvisaririra zvaro zvekare,
uye mambakwedza anofashamira miganhu yegungwa.
Iyo emaridhi girini inopenya pamberi pesuwo rematavi,
apo ini ndichigadzirisa mabote angu
Uye ini ndinodonhedza chirauro chinonhuwirira
Ndinosunga machubhu emishenjere kudiridzira bindu.
Shiri dzinouya dzichibhururuka dzatova legion
uye munzvimbo ine ruzha vanopokana yekugezera.
Nguva yechando mambakwedza
Varume nezvikara zodiac
Zvakare zvakare pamusoro pedu.
Green mabhodhoro ewaini, matsvuku emakungu makomba,
Zvese zvisina chinhu, zvakarongedzwa patafura.
"Ungakanganwa sei munhu wekare waunoziva?"
Uye mumwe nemumwe, akagara pasi, anoteerera kufunga kwavo.
Kunze, mavhiri engoro aidedera.
Mumakondo shiri dzinomuka.
Mune imwe mambakwedza echando munguva pfupi
Ndinofanira kutarisana nemakore makumi mana angu.
Vanondisundira nguva dzakaoma, dzakasindimara,
Bent mumumvuri murefu werubvunzavaeni.
Hupenyu hutendeuka uye hunopfuura, kudhakwa wisp.
Iyo Painted Goshawk
mhepo nechando zvinokwira:
inoyemurika pendi yeiyi goshawk.
Yakagadzirira kuvhima tsuro ine hunyanzvi, inosimudza mapapiro ayo,
uye, muchimiro, maziso ake anotaridzika seaya etsoko inoshungurudzika.
Kana iyo silika twine yakasununguka
iyo inomusunga padanda rinopenya
kumirira muridzo kuti utize;
kana vakamusiya kare
kurwisa shiri dzakajairika,
minhenga neropa zvaizopararira mudunhu rakakura.
Ndichitarisa kumvura kubva pakutuka ndakarega moyo wangu uchibhururuka
Kure nemadziro, pane kutuka kukuru,
pasina musha wekuzvidzivirira,
kutarisa kunosvika kure, kure kure.
Mvura yakachena yerwizi irwo rwunodira kufashamira mugero.
uye miti yakanyarara izere nemaruva.
Pakati pemvura yakanaka,
iyo minnows inoonekwa,
uye oblique kutiza kwenyenguru
kune pairo yemhepo yakanyorovera.
Muguta, zviuru zana zvemisha,
pano mhuri mbiri kana nhatu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Du Fu. Nhetembo shanu dzekurangarira yechinyakare yenhetembo dzeChinese
Ini ndauya kuna nyanduri naCharles Bukowski ..., sekureva kwenhetembo, mudetembi wechiChinese uyu ndemumwe wevaanoda.